ဇူး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဇူး
Posted by ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် on Aug 10, 2013 in Creative Writing, Photography, Travel | 12 comments
ဘာနာမည်ပေးရမှန်းမသိတာနဲ့ ဇူး လို့ပဲ ပေးလိုက်တယ်ယယ ရန်ကုန်တိရိစ္တာန်ရုံအတွက် ဓာတ်ပုံလိုတယ် ဆိုလို့ အကူအညီပေးတဲ့ အနေတဲ့ ရိုက်ပေးလာခဲ့တာပါ.. ကျနော့ post လေးကို အားပေးတဲ့ သူများအတွက် အကြင်နာလေး ပေးချင်ပါတယ်..
၂။ အကျဉ်းစံ ကေသရာဇာ
၃။ သူလေးအိပ်နေမယ် ကမ္ဘာခြားတဲ့အထိ….
၆။ ရွှေတိဂုံကိုတောင်ရောက်တဲ့အမျိုးကွ ဘာမှတ်နေလဲ
၇။ ဘယ်ဆတ်မှ လူမထင်ဘူးကွ
၈။ ရွှေလည်တိုင်ကိုကွယ် အနမ်းလေးပေးချင်တယ်
၁၀။ Black & White
၁၁။ မပုတု နဲ့ ခဏခဏမှားတယ်
၁၃။ မိချောင်းသား လျှာကိုရှည်သတဲ့
၁၄။ ဖျံကျတယ်ဆိုတာ ဂလိုလား
၁၅။ ဖျံကျတယ်ဆိုတာ ဂလိုလား
၁၆။ မင်းတို့လက်တွေ လေထဲကို မြှောက်ထားလိုက်
ဆင်နှာမောင်း နဲ့ သစ်ကုလားအုပ် ပုံ တွေ က ပိုပြီး မိုက်မိုက်။
ကျောက်စ်ကတော့ အနှောင်အဖွဲ့နဲ့ သတ္တဝါတွေကိုမြင်ရရင်၊
စိတ်ထဲမကောင်းလှတာမို့ ဇူးဆိုရင် ရှောင်ပါ၏…
အဲ… ချက်စားဖို့ဆိုရင်တော့ဖြစ်တယ်၊ ဟင်္သာတစ်ကောင်လောက် ရမလားဟင်…
ဒီရွာထဲမှာထင်တယ်.. အောင်သုခထမင်းဆိုင်ကောင်းတယ်ပြောလို့ ကြုံတုန်းဝင်စားဖြစ်တယ်.. ဟင်းတွေထဲ ဆတ်သားပါရှိတယ်ဆိုတော့ ဆတ်သားလည်းမှာစားဖြစ်တယ်.. စိတ်ထဲမှာနယ်ဖက်ကရတယ်ထင်တာပေါ့… ဆိုင်ကပြန်အထွက်မှမေးမိတယ်.. အဲဒီဖက်ကပို့တာထင်တယ်လို့.. ဦးလေးက မဟုတ်ဘူးတဲ့ တိရစ္ဆာန်ရုံကတဲ့.. နင်သွားတယ်..
ရွာထဲ ဇူး ရောက်လာပြီဆိုတော့
“တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်သွားကြမယ်…အင်္ကျီဝတ်ကွယ်သမီးလေးရယ်…လည်လည်သွားမယ်လာခဲ့… အဖေအားတဲ့နေမှာ ပြိုင်ကားလေးစီးကာ …. ကဲ လာသမီးနဲ့လည်မှာ… လာမြန်မြန်…´´
ဆြာ အုပ် ရယ်။
ဒီတစ်ပတ် ဇူး ကိုသွားမို့ဟာ ဆြာ့ ပုံတွေ ကြည့်ပြီး အားငယ် သွားတယ်။
စကားမစပ် ပို့(စ) ထဲ ရောက်ရောက်ချင်း အာဘွား ပေးခံလိုက်ရသကိုးးး
အိပ်နေတဲ့ သူလေးကိုပဲ ပေးသွားတယ်။ သူ မနိုးခင်!
တွန့် တွန့် သွား ပါတယ် ။
အမျိုးတွေ ပုံဆိုတော့ အပီအပြင်ပဲနော့။
မြွေပေါ်ခွထိုင်နေတဲ့ပုံကော မတင်ဘူးလား စာအုပ်
အာဘွား လည်း ဟုတ်ဘူး ..
အာမွား … ဒဲ့ ….
တားဂဒေါ့ … ဟိုဖျံပုံလေးတွေကို ပိုဘောကျဒယ် …
စပါယ်ရှယ် ရေရေလည်လည် တော်ဒဲ့ ဆြာအုပ်ဘဲ ….
ဦးမိုက် ဘော်ဘော်တွေမပါလို့ စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ ဗျာ ထပ်ရိုက်ပေးပါမယ်
ကိုကျောက်စ် ဟင်္သာတော့ရဘူးဗျ မိကျောင်းရေခွံသုတ်ရမယ်.. စားမလား ဘီဘီနဲ့မြည်းရအောင်
ဦးခ တားတားတို့ရော ပြိုင်ကားစီးရဘူးလားဂျ
garfield ကအာဘွားပေးခံလိုက်ရတာကိုး .. မနိုးခင်ပေးတော့ ပျင်းချာကြီး မအိပ်ခင်ပေးရတယ် ငိငိငိ
ဟိုပင်လယ်နဲ့တူတဲ့ ငံကျိကျိယောက်ကျား ကြီး တောင် တွန့်တွန့်သွားတယ်ဆိုတော့ ခင်ညားတစ်ခုခု အတွတ်ခံနေရပီ
အန်တီ ဘုံမာ အညိုးတွေက မစုံသေးလို့ ထပ်ရိုက်ဦးမလားလို့ ဦးမိုက်ကလဲ သူ့ဘော်ဘော်တွေမပါလို့တဲ့
ဥပေါက် မွေပေါ်ခွထိုင်နေတဲ့ပုံတော့ မတင်တော့ပါဘူး တော်ကြာ ဟယ် မွေလေးက ချစ်ချာလေး ကြိုက်တယ်ချိုမှ အနော် ဒုက္ခရောက်နေဦးမယ်
အံစာ ကတော့ ဖျံ ကလေးတွေကို သဘောကျတယ်ပေါ့ ဖျံလေးတွေကို ခင်တယ်ပေါ့ ဟီဟိ
ဒါ့ပုံဆြာ အကျော်အမော်မို့ထင်တယ်…. မော်ဒယ်တွေက ပြောစကားနားထောင်တယ်။ :loll: